Tsy maintsy arovana manoloana ireo mety hanimba azy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Fiarovana ny vokatra malagasy no antom-pisian’ny sampan-draharaha nasionaly misahana ireo fanintsiana isan-karazany eo amin’ny varotra na Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales” araka ny fanazavana nentin’i Barthelemy izay tale jeneraly amperinasa. Nampahafantatra ireo fepetra efa noraisina niarovana ny vokatra vita malagasy amin’ireo fifanakalozana ara-barotra ny rafitra mpanao fanadihadiana momba lalàn’ny fifaninanana ara-barotra ity tale jeneraly ity ny alarobia 21 aogositra teo. Eny Antanimena no foiben’ity sampan-draharaha miankina amin’ny ministeran’ny varotra ity.
Raha ho an’ny taona 2018 dia ny paty fihinana sy ny bodofotsy avy any ivelany ary ny vovo-tsavony no vokatra 3 no nanaovan’ny ANMCC fanadihadiana dia. Hita eny anivon’ny mpaninjara eny ny fiparitahan’ireo vokatra telo ireo fa indrindra fany paty sy ny vovo-tsavony. Misy anefa ny orinasa mamokatra azy ireny eto antoerana. Izay mamelona mpiasa maro, no mandoa hetra ara-dalàna.
Amin’ity taona 2019 ity indray dia vokatra 3 vaovao no nofantenana hanaovana fanadihadiana hiarovana ny indostria malagasy dia ny menaka fampiasa amin’ny milina, ny menaka sakafo ary ny savony vaingany. Efa nisokatra ny fanadihadiana ireo vokatra ireo. Efa maro ny orinasa nandraisana fanapahan-kevitra. Ho an’ny fanafarana ny menaka fampiasa amin’ny milina dia 19% ny tataon-ketra eo amin’ny fanafarana azy. 34% kosa ny fanafarana savony ary 21% ny fanafarana ny menaka sakafo. Ankoatra izay, tratran’ny fepetra antsoina “anti-dumping” ny avy any Malezia ary misy ny sazy amin’ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fanondranana rononomandry izay nanaovana tataon-ketra 38%.
Maro ireo vokatra tsy hita eny amin’ny tsenantsika intsony amin’izao fotoana izao toy ny Nestlé vokatry ny fahambanian’ny vidin’entana tahaka ny nataon’ireo tany Malezia ireo. Matiantoka raha mbola miditra. Tena misy tokoa ireo hosoka ataon’ny mpandraharaha sasany avy any ivelany, isan’ny malaza amin’izany ny sinoa. Nalaza ratsy ireo sigara Good Look sandoka tratra teny amin’ny fadin-tseranana. Vao tsy ela akory izay no nanapotehana teny amin’ny Artec ireo finday tsy nanara-dalàna tsisy ilay antsoina hoe IMEI na nomerao fanondroana ny finday iray raha tokana ny puce ao aminy.